November 2019 - Swelsone News
November 8, 2019 space	0 Comments
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် . ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း . အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့်
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း အမှတ်စဉ်(၁၅/၂၀၁၉) =============================== (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) ======================== (မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၇:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ================================= (က) အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ (၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော
November 7, 2019 space	0 Comments
၅.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အတွင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်စဉ် ကြောင့် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားသော ဆရာတော်နှစ်ပါးအား မီးသဂြိုလ် ၅.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ကျွန်းကလေးကျေးရွှာ ဟိတဓရဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက် တာဝန်ခံဆရာတော် အရှင်ဝိသေဌ (၂၈နှစ်) နှင့်
အသက်(၁၆)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ မိခင်ကို လုံးထွေးပြီး မျိုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ မြွေကြီးကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်ပိုင်းပြတ်သည်အထိ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို WorldOfBuzz မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Muhammad Rasul ဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ မုန်တိုင်း နှစ်လုံးအရှိန်ကြောင့် တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၁ ခုတွင် နေ ရာကွက် မိုးကြီးနိုင်၍ သဘာဝ ဘေးသတိပြုနေထိုင်ရန် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးသည်။
မုဆိုးမက ဇနီးထက် အပြုအစုကောင်းလို့ ဖောက်ပြန်တာပါလို့ ဝန်ခံတဲ့အမျိုးသား
November 6, 2019 space	0 Comments
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးထက် မုဆိုးမက အလှအပထက် ပိုနေသလို၊ သူရဲ့ ကာမဆန္ဒဆာလောင်မှုကိုလည်း မုဆိုးမကသာ ပြေပျောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်၊ သူ နောက်မီးလင်းခဲ့ရတာပါလို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို WorldOfBuzz မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဇနီးနဲ့
ဖုန်း မှန်ကွဲနေတာကို သုံးလို့ရသေးတယ် ဆိုပြီး ဆက်သုံးနေရင် ဘာတွေဖြစ် မလဲ ၊ ၄င်း ဆိုးကျိုး တွေဘာတွေလဲ
ဖုန်းမှန် ကွဲနေတာ ဆက်သုံးရင် ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုး တွေ စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ်
Facebook မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ YBS ကားဆရာကြီး ကားနဲ့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံလိုက်ရတဲ့ အခါ
လောကမှာ လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှူပုံခြင်း မတူဘူးလို့ ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်တွေ့ပြလိုက်တာကတော့ YBS 37 က ကားဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်Bus ကားမောင်းသူတွေဟာ ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုကြောင့် အမြဲစိတ်အလိုမကျမှုတွေ နဲ့ စိတ်မရှည်ခြင်းတွေကြောင့် ခရီးသည်တွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တတ်ပေမယ့် အခု YBS
အဖေ့ ကို မလုပ်ကျွေးနိုင်လို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ပို့တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရှင်းပြလာတဲ့ ဦးဝင်နိုင်ရဲ့ သမီး ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) အခုတလော လှုပ်ခတ်နေတဲ့ အနုပညာသတင်းတစ်ခုကတော့ နဂါးလေးဝင်းနိုင်လို့ လူသိများတဲ့ ဦးဝင်းနိုင် (အနုပညာ) ရဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းနိုင်ဟာဆိုရင်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီး ဇရာရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့် ကျန်းမာရေးမကောင်း